Ngingayimisa kanjani i-pacifier yami kusuka kumntanami?
Ukulawula kusiza ukubuyisela kancane kancane
I-Easter bunny, i-Santa Claus iphinde ivuselele inganekwane
Izingane nezinsana ezingenakucatshangwa ngaphandle kwe-pacifier, ngoba zingaphezulu noma ezingaphansi kwezinsiza zabo ezizithandayo futhi abazali bajabule lapho inzalo ngezinye izikhathi iphumula. Noma kunjalo, abazali abaningi bazizwa bengalondekile uma bebhekene nesikhathi esihle sokususa i-pacifier yabo.
Abanye ochwepheshe bathi ingane kufanele isuswe ku-pacifier ngaphambi konyaka wesibili wokuphila.
Isizathu salokhu ukuthi ukusetshenziswa okuphakade kwe-pacifier kuyingozi ukuthi ukulimala kwamazinyo noma umhlathi kuvela emntwaneni.
Kodwa-ke, lesi sitatimende jikelele asikwazi ukusetshenziswa kuwo wonke umntwana oyedwa, njengoba ukuthuthukiswa kwengane encane ngokwemvelo kuqhubeka ngamazinga ahlukene.
Ezinganeni eziningi, i-pacifier isetshenziselwa ukuqinisekiswa. Ikakhulukazi ebusuku kusiza kakhulu. Isizathu sokusetshenziswa kwe-pacifier yisimo somntwana. I-reflex yokuncelisa ikhumbuza ukuncelisa esifubeni sikamama, okubalulekile ekuthuthukiseni ingane. Ukubeletha ngaphezu kokudla okunomsoco kunomsebenzi wokunciphisa.
Abaningi abahlengikazi bazoqinisekisa ukuthi ingane ivame ukuthula ebusuku kuphela isipho sebele. I-pacifier ingenza umsebenzi ofanayo.
Uma unganikeli ingane i-pacifier, kungenzeka ukuthi ingane ingakhetha enye isithupha esikhundleni se-pacifier.
Nokho, uma umuntu ekholelwa umbono wezazi, ngakho isithupha sincelisa kodwa ke pacifier kungcono, Izizathu zenziwa ukuthi ukunceliswa kwe-pacifier kuboniswe ukuthi kushiyiwe ngokushesha kunomuntu osondeza esithombeni.
Ukungaqondakali kwamazinyo, okungabangelwa ukuphuza isikhathi eside, nakho kuyingozi nakakhulu ngesithupha kunokuba yi-pacifier.
Ngaphezu kwalokho, ungenza isipho se-pacifier kangcono kunesithupha ingane enayo ngaso sonke isikhathi. Noma kunjalo, kubazali abaningi abasha, umbuzo uhlala, ungayenza kanjani kangcono ingane yakho ku-pacifier oyithandayo?
Ngaphambi kokugaya kuqala kokuqala ukujwayela. Ngakho-ke, ungavumeli ukuba kube ukusetshenziswa okuphakade kusukela ekuqaleni, ngoba lokhu kuzokwenza ukugcoba kube lula kamuva. Kusukela ekuqaleni kufanele uhambe ku-pacifier ngezikhathi ezithile ezifana nokulala noma ukunikeza ukuqinisekiswa.
Ngaphezu kwalokho, akumele unike ingane ngokushesha i-pacifier kusukela ngelinye ilanga kuya komunye ngokungazelelwe. Kodwa-ke, kunconywa ukuba ushiye kancane kancane i-pacifier, ngoba ukulonda okuphelele kulula kakhulu. Abazali kufanele babonise ingane futhi baqinisekise ukuthi kungaba kuhle ukuba intombazane enkulu noma umfana omkhulu manje futhi ukuthi awudingi ngempela i-pacifier.
Ukwenza kube lula kubantwana ukuba baphumule, ungasebenzisa izinsiza ezihlukahlukene. Okunye kungenzeka, isibonelo, ukuthola incwadi yabantwana ngalesi sihloko. Kukhona ukukhethwa okukhulu kwezincwadi ezinjalo ezibuye zibheke, isibonelo, isihloko se-enkulisa, isikole noma isibindi.
Izingane eziningi ziyekezela kulezi zindaba futhi zifuna ukuziphindaphinda izikhathi eziningi. I-Conny ayidingi i-pacifier, ngakho-ke uvame ukwakhiwa isidingo sokuyeka ukudinga i-pacifier nokugaya kulula.
Ingane ingaqonda ukuthi kungase kudingeke ukuba isebenzise kancane kancane i-pacifier.
Enye indlela enhle yokwenza kube lula ukuthi ingane ivulele i-pacifier ukugubha uhle oluhle ukuze kucace ingane ukuthi isigaba sesiphelile.
Ngokufanayo nokulahlekelwa izinyo, ungasebenzisa inganekwane ye-pacifier njengesihambisana nenqubo efana nokulethwa kwe-pacifier.
Izinganekwane zishintsha i-pacifier, ebeka ngaphansi komcamelo, njengesipho. Enye indlela ukufaka i-Easter Bunny noma i-Christ Child ekulethwe kwe-pacifier. I-Easter bunny ibuye ihlanganyele i-pacifier ibe isipho esihle, kufana ne-pacifier fairy.
Noma ubani onabanye abantwana embuthanweni wabangani noma umndeni, angabuye akhulume ukudluliselwa kwe-pacifier komunye umhlabathi omncane nomntwana wakhe. Ingane encane ingachazwa, isibonelo, ukuthi ingane encane manje idinga kakhulu ngokuphuthumayo i-pacifier.
Njengoba izingane zifisa ukuba zide futhi zinolwazi, le mpikiswano ivame ukusebenza kahle kakhulu. Mhlawumbe futhi ngokuhambisana nenkondlo ye-pacifier noma i-Easter Bunny / Christ Child, ozogcina futhi ngokuzethemba ukuthi konke lokhu kuhle. Kubalulekile kunoma yikuphi ukucindezela ingane yakho.
Yonke ingane inezinyathelo zayo. Ngakho ungazitholi ukuziqhathanisa, kodwa kancane kancane ukhulise ingane yakho kusukela ku-pacifier. Kuhle kakhulu, lokhu akuyona inhlekelele kumazinyo abantwana - emva kwakho konke, sonke sishiye i-pacifier.
Umama wekhasi lombala nosana
Ikhasi lokubala lomama nabantwana
Ikhasi lokubala lokuncelisa ingane
Umama wokubala umama nomntwana
Ikhasi lombala wesigodlo nosana
Ikhasi lokubala lomntwana